Alaska Airlines dia nanangana fifanarahana codeshare niaraka tamin'ny Qatar Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Qatar » Alaska Airlines dia nanangana fifanarahana codeshare niaraka tamin'ny Qatar Airways
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Manomboka amin'ny 1 Jolay, io fifanarahana io dia ahafahan'ny mpandeha ao amin'ny Qatar Airways manoratra fitsangatsanganana ary mifandray mora amin'ireo zotra mihoatra ny 150 manerana ny tamba-jotra Alaska.
Nanomboka ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Qatar Airways tamin'ny 15 Desambra 2020 i Alaska, miaraka amin'ny fahafahan'ny mpikambana ao amin'ny Mileage Plan mahazo karama kilometatra amin'ny sidina Qatar Airways.
Tamin'ny 31 martsa 2021, niditra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny oneworld i Alaska ary nanitatra ny fiaraha-miasa amin'ny Qatar Airways.
Amin'ny volana ho avy, ny vahinin'i Alaska dia afaka hamandrika ny dia amin'ny sidina Qatar Airways eo anelanelan'ny Etazonia sy Qatar ary ny sisa.
As Alaska Airlines manitatra ny fahatongavany manerantany miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'izao tontolo izao, nanambara tamim-pireharehana androany izahay fa hanangana fifanarahana codeshare miaraka amin'i Qatar Airways, mpikambana iray ao amin'ny fiaraha-miasa izay manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina roa ary manome safidy mahaliana sy mety amin'ny mpandeha.
Manomboka amin'ny 1 Jolay, mamela ny mpandeha hatrany ny fifanarahana Qatar Airways mba hamandrihana fitsangatsanganana sy hifandraisana mora amin'ireo zotra mihoatra ny 150 manerana ny tambajotran'i Alaska. Any amin'ny morontsiraka Andrefana, Qatar Airways dia manana serivisy tsy an-kijanona mampifandray ny ivon-toerany lehibe ao Doha amin'ireo tanàna telo misy vavahady voalohany any Los Angeles - Los Angeles miaraka amina sidina isan'andro in-droa, ary sidina isan'andro any San Francisco sy Seattle - ahafahana mampifandray tsara.
"Faly izahay fa anisan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Qatar Airways, iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eran-tany," hoy i Ben Minicucci, CEO an'ny Air Force Alaska. “Rehefa miverina ny dia iraisam-pirenena, dia zava-dehibe ny hanomezana safidy ho an'ny vahiny mora kokoa sy mora vidy kokoa hivoahana ary hijery toerana lavitra indray. Ny sidina Qatar Airways tsy miato avy amin'ny foibenay any Seattle, San Francisco ary Los Angeles mankany Doha ary ny teboka any ankoatr'izay dia manome vahana ireo vahininay hitsidika saika ny firenena tadiaviny.
"Faly izahay mampandroso ny fiaraha-miasa ara-barotra amin'i Alaska Airlines ary miarahaba ny mpikambana vaovao indrindra amin'ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny lisitr'ireo mpiara-miasa stratejika Qatar Airways," hoy ny Lehiben'ny Executive Qatar Airways Group, ny Andriamatoa Akbar Al Baker. "Ity fifanarahana ity, miampy ny fiaraha-miasa misy eto amintsika, dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fisianay any amin'ny faritra ary hanomezana ny mpandeha Qatar Airways mandeha sy miverina amin'ny vavahady 12 amerikana misy antsika amin'ny fidirana amin'ny tambajotra feno fifandraisana tsy misy tohiny manerana an'i Etazonia."
Nanomboka ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Qatar Airways tamin'ny 15 Desambra 2020 i Alaska, miaraka amin'ny fahafahan'ny mpikambana ao amin'ny Mileage Plan mahazo karama kilometatra amin'ny sidina Qatar Airways. Tamin'ny 31 martsa 2021, niditra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny oneworld i Alaska ary nanitatra ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Qatar Airways mba hanomezana tombony ny elita, anisan'izany ny fisafidianana seza tian'ny; fisavana, laharam-pahamehana ary fidirana amin'ny laharam-pahamehana; fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny vola fanampiana amin'ny entana fanampiny. Qatar Airways dia mpikambana ao amin'ny oneworld nanomboka tamin'ny 2013.
Amin'ny volana ho avy, ny vahinin'i Alaska dia ho afaka hamandrika ny dia amin'ny sidina Qatar Airways eo anelanelan'i Etazonia sy Qatar ary mihoatra ny toerana tiany indrindra any Afrika, Moyen Orient ary Azia atsimo.